Lacag malaga helaa internet sida Social Media-ha Arimaha Bulshada | Somali music, lyrics, songs, mp3 Warwad
Lacag malaga helaa internet sida Social Media-ha
Lacag doolar ah
Su’aashan jawaabteeda ma qarsana qof walbo Haa ayaa usoo baxeeso.
Laakiin waxaan rabnaa inaan gudaha ugalno, Haa waa jiraan in lacag laga sameeyo websetyada, youtube-ka iyo Socialmedia-ha caadiga ah.
Soomaalida badankood waxay lacag aad uyar ka sameeyaan youtube-ka waloo ay jiraan dad lacag fiican ka sameeyo. websetyada, asigana sidoo kale waxaa jiro dad badan aan lacag badan ka sameenin amaba waxba ka sameenin .
1. Youtube-ka qof walbo waa sameesan karaa, laakiinse qof walbo lacag kama sameen karo, sidoo kale dad aad utiro yar ayaa ka sameeyo inta udhaxeeso 500 ilaa 2000 USD Soomaalida. badankood waxay udhaxeeyaan 100 ilaa 300 USD lacagta ay sameeyaan.
Dhibaatada wayn intaa ma’ahan juhdiga ay ka galaan ayaa aad udhib badan oo marmarka qaar qofka waqtigiisa iyo sharaftiisu ayuu udhaafsadaa si youtube wax ugu helo. waloo dad si wanaagsan wax ugu sameeyo ay jiraan..
2. Social media haa asna lacag waa laga sameeyaa, lkn waa qaab kale oo ka duwan si toos ah looguma sameeyo waxaa jira luuq la maro, tusaalo ahaan qof ayaa kula soo hadli karo ku dhihi kara „ ii xayeesii shaygan, sidaas lacag kugu siinaa“.
Shirkadaha iyo shaqsiyaadka caadiga ayaa qaabka isticmaalaan si u xayeesiistaan agabkooda.
3. Websetka oo ah daqliga ugu wayn intenetka ee lacag laga sameeyo maadaama labadaa kor asalkooda ay ayaga yihiin websetyo.
Soomaalida ka sameeso ayaa asna aad ubadan dadka ku jira sidaas awgeed dadna lacag fiican ayee ka sameeyaan dad in yar ama waxba kama sameeyaan .. Lacagta badan dadka badanaa ka sameeyaa 1000 ilaa 5000 USD inta udhaxeeso webseyada waa ween waxaa jiraan Websetyo sameeyo malaayiin Dollar oo Soomaali leedahay.
Isku soo wada duub 3 daaba waa laga sameen karaa, mana laga sameen karo, waxayna hadba ku xerantahay qofka inta ogaal oo heesto.